के आयो यस्तो रोग ? एकाएक बिरामी पर्न थाले मानिसहरु ? अस्पतालमा बिरामीको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेपछी चिन्ता बढ्यो – My Blog
No Comments on के आयो यस्तो रोग ? एकाएक बिरामी पर्न थाले मानिसहरु ? अस्पतालमा बिरामीको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेपछी चिन्ता बढ्यो
काठमाडौं । चितवनका अस्पतालमा ज्वरोका बिरामीको सङ्ख्या बढेका छन् । भाइरल ज्वरो र मौसमी रुघाखोकीका बिरामीको सङ्ख्या बढेको हो । मौसम परिवर्तन भएसँगै अस्पतालमा भाइरल ज्वरोका बिरामीको चाप बढेको हो ।
← सुत्केरी नुसरतलाई तपाईको छोराको बुवा को हो भन्दै जब पत्रकारले सोधे ? दिइन् यस्तो मुख बन्द हुने जवाफ → दु,खद खबर – प्रहरी हिरासतम रहेका हरी उदासी बारे यस्तो खबर आएपछी सबितालाई के भयो यस्तो ? भिडियो सहित